New Oriental စီအီးအို-အမျိုးသား ဖိနှိပ်မှု နောက်ပိုင်း လူ ၆၀, ၀၀၀ ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှား ခဲ့သည် - Pandaily
Jan 10, 2022, 20:23ညနေ 2022/01/10 23:13:29 Pandaily
မကြာသေးမီက New Oriental Education သည် ၀ န်ထမ်း ၆၀, ၀၀၀ ကို အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်းသည် Weibo တွင် လမ်းကြောင်း သစ် တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Yu Minhong, တရုတ် ကျူရှင် ကုမ္ပဏီ ကြီး၏ တည်ထောင် သူနှင့် ဥက္က chairman ္ဌ,ဒီနေ့ WeChat ပို့စ် မှာ ဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်ပြင်ပ ကမ္ ဘာက မည်မျှ ပင် အကဲဖြတ် ပါစေ New Oriental ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုဆက်လက် ပြုလုပ် ရန်လိုအပ်သည်။ အကြီးအကျယ် အလုပ်ဖြုတ် ခံရပြီးနောက် ၌ပင် ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ထမ်း နှင့် ဆရာ ၅၀, ၀၀၀ ခန့်ကို အလုပ်ခန့် ထားသည်။
New Oriental သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စျေးကွက် တန်ဖိုး ၉၀% ကျဆင်းခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ် မှုမှ ၀ င်ငွေသည် ၈၀% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကျောင်း ထွက် ငွေ များ၊ ကျူရှင် ပြန် အမ်းငွေ များနှင့် သင်ကြားရေး နေရာ ငှားရမ်းခ များ ရပ်ဆိုင်း ခြင်းတို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီ သည်ယွမ် ဘီလီယံ ၂၀ နီးပါး (ဒေါ်လာ ၃. ၁ ဘီလီယံ) ကုန်ကျ ခဲ့သည်။Yu က Weekend မှာ နောက်ထပ် ပို့စ် တစ်ခုမှာ.
New Oriental Education ၏ ၂၀၂၁ ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၃၁ ရက်အထိ New Oriental ၏ ၀ င်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄. ၂ ၇၇ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့ အနက် ကော်ပိုရိတ် ပညာရေး အစီအစဉ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၉၄ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ၉၂. ၁% ရှိသည်။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ စာအုပ္ ႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားမွ ၀င္ေငြ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ ၄၀ ရွိခဲ့ၿပီး ၇ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။
“ဤ လုပ်ငန်းစဉ် ၌, New Oriental လုံးဝ K-9 ကျူရှင် ဝန်ဆောင်မှုကို အဆုံးသတ် ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက် တယ်, အထူးသ ဖြင့် အရည်အသွေး, စာတတ်မြောက် ရေး, သုတေသန, အတွေ့အကြုံ ပညာရေး ၏ စည်းကမ်း ချက် များ၌, ကျောင်းသားများ အပြည့်အဝ တိုးတက်မှုနှုန်း များအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေး ပိုပြီး စီမံကိန်းများ ကို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား စျေးကွက် နှင့် ပြည်ပ တရုတ် စျေးကွက် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့် ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက် တယ်” ဟု Yu ကဆိုသည်။
Yu ကပြောကြားရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်များ ကိုတိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် “Oriental Select” ၏ ရောင်းအား မှာ အလွန် နည်းပါး ပြီး စုစုပေါင်း ယွမ် သိန်း ထောင် ချီ သာ ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် ပုံသဏ္ stage ာန် အဆင့် တွင်ရှိ နေသောကြောင့် ဤ စိတ်ကူး မှ ဆုတ်ခွာ ရန် မလိုအပ် ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ တွင် ရှေ့သို့ ချီတက် ရန် အကြောင်းပြ ချက်နှင့် လှုံ့ဆော် မှုရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:New Oriental ၏ပထမဆုံး စီးပွားဖြစ် စီးဆင်းမှု သည်ယွမ် ၅ သန်း သာ ရောင်း သည်
Yu က New Oriental မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားသော တရုတ် ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်သူ New Wave Pictures သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်ကောင်းသော ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ် မှုတွင်ပါ ၀ င် ခဲ့ ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်း ၏ရှေ့ ပြေး ပုံစံသည် Daliangshan ဒေသရှိ Yi လူငယ် ဘတ်စကက်ဘော အသင်း ဖြစ်သည်။ ဒီ ဇာတ္ကားကို အြန္လိုင္း ႐ုပ္ရွင္ အျဖစ္ စတင္ ထြက္ရွိ ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ ႐ံု ေတြမွာ ျပသ ခ်င္ ေနၾက ၿပီလို႔ ယူ က ေျပာပါတယ္။ New Oriental သည် အနာဂတ်တွင် စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်ကောင်းသော ရုပ်ရှင် များတွင် နောက်ထပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။